WARARKA MAANTA | HOYGA WARARKA CAALAMKA | Page 2
Mosul – Tabiye.com- Ayadoo uu ciidanka Ciraaq isu diyaarinayo duulaan ka dhan ah xooggaga ururka isku magacaabay dowladda Islaamiga ee ku sugan Galbeedka Mosul, ayaa Qaramada Midoobay waxa dhinacyada dagaallamaya ugu baaqday badbaadinta boqolaalka kun ee dadka rayidka ah ee halkaasi ku go’doonsan. Diyaaradaha dagaalka ee Ciraaq ayaa deegaankaasi ku daadiyay warqado ay dadka rayidka ah uga digayaan duulaanka kusoo ...
Muqdisho- Tabiye.com- Xafladani lagu taageerayay Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxaa kasoo qeyb galay dhamaan bulshada Soomaaliyed qeybaheeda kala duwan Ganacsato, Culumo, Odoyaal, iyo Haweenba. Masuuliyiintii goobta ka hadashay waxaa kamid ahaa Mahad Cumar Cabdi oo ah ganacsade ku dhaqan Koonfur Afrika ahna saaxiib si gaar ah ugu dhaw Farmaajo ayaa in badan ka hadlay hadafka fog ee laga filan ...
Muqdisho- Tabiye.com- Guddoomiyaha Golaha Shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Sheekh Cusmaan “Jawaari” ayaa magaalada Muqdisho ku qaabilay Safiirrada dowladaha Norway iyo Turkey u fadhiya magaalada Muqdisho. Guddoomiyaha Golaha Shacabka ayaa qaabilay danjiraha Dowladda Norway u qaabilsan Soomaaliye Danjire Mr Victor Ronneberg oo uu wehliyey Ergeyga gaarka ah ee Dowladda Norway u qaabilsan Soomaaliya Mr Jens Mjaugedal waxaana uu kala ...
Muqdisho-Tabiye.com- Hay’adda Nabadsuggida iyo Sirdoonka Soomaaliya ayaa shaacisay in ay gacanta ku soo dhigtay gaari ay wateen rag maanta dilal ka geystay magaalada Muqdisho. Hay’adda Nabadsuggida iyo Sirdoonka Soomaaliya ayaa tilmaamtay in xaafadda Jamhuuriya ee degmada Yaaqshiid ay kasoo qabteen gaariga ay wateen raggii weeraradii lagu diley afhayeenkii hore ee Maamulka Ximan iyo Xeeb iyo askari ilaalo u ahaa taliye ...
Muqdisho-Tabiye.com- Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, ayaa warqadaha aqoonsiga ka guddoomay safiirka cusub ee dowladda Ingariiska u soo magcaabdey Soomaaliya. David William Concor ayaa badalay Safiiradii hore ee Soomaaliya u qaabilsaneyd dowladda Britain. David William Concar Safiirka cusub ee dowladda Ingariiska, ayaa sheegay in kulanka isaga iyo madaxweynaha ay isku soo qaadeen in si dhab ah loo xoojiyo taageerada joogtada ah ...
Muqdisho- Tabiye.com- Taliye kuxigeenkii hore ee Nabadsugida Qaranka Xasan Maxamed Cali oo loo yaqaano Xasan Dheere ayaa goor dhow lagu dhaawacay magaalada Muqdisho. Dabley hubeysan ayaa gaari uu la socday Taliye kuxigeenkii hore waxa ay ku rasaaseeyeen degmada Xamar weyne, Isgoyska Ceel Gaabta. Wararka ayaa sheegay in Jeneraal Xassan Dheere uu ku dhaawacmay weerarka halka uu ku dhaawacmay darawalkiisa. Jeneraal ...
Muqdisho- Tabiye.com– Waxaa si weyn loo hadal hayaa doorashadii ka qabsoontay dalka taas oo ay ku loollamayeen 21 musharrax. Intuba waxay ku hardamayeen kursiga madaxweynenimo ee dalka. Saadaal iyo qiimeyn ay sameeyeen khubaro caalami ah ayaa beenowday. halka filashadii shacabka Soomaaliyeed ay rumowday. Lama filaan ayey noqotay natiijadii ka soo baxday doorashada. Maxamed Cabdullaahi Maxamed oo loo yaqaanno Farmaajo waa ...